सबैलाई क्यान्सर धेरै खतरनाक छ भनेर थाह छ। सालाना क्यान्सर कारण विश्व को सबै कुनामा मर्न, लाखौं मानिसहरू। यो रोग को उद्भव atypical सामान्य मानव कक्षहरूको degeneration संग सम्बन्धित छ - छ, हो कि हाम्रो Tissues मा निहित छैन ती। Oncologic प्रक्रिया कुनै पनि अंग विकास हुन सक्छ। समय एक डाक्टर देख्न गर्छ भने, क्यान्सर सबै प्रणाली सर्छ र पीडादायी मृत्यु जान्छ। रोग एक लामो समय को लागि जानिन्छ, अझै यो अझै पनि पक्के ज्ञात छैन। पहिचान र क्यान्सर को उपचार को नयाँ तरिका को विकास मा संलग्न चिकित्सा संस्थाहरू मध्ये एक, संस्थान छ। Herzen। संस्था को सञ्चालनको सम्पूर्ण अवधि भर धेरै प्रसिद्ध वैज्ञानिकहरू कार्यरत थिए। अद्भुत डाक्टर धन्यवाद संस्थान हाम्रो समय मा thrives।
MNIOI Herzen को इतिहास
समयमा मास्को विश्वविद्यालयमा शल्य चिकित्सा व्यवहार मा संलग्न थियो प्रसिद्ध प्रोफेसर Levshin, आबद्ध कि संस्थाहरू सिर्जना को विचार। धेरै अपरेसन सञ्चालन, डाक्टर बिरामीको को एक विशाल प्रतिशत क्यान्सर बाट पीडित भनेर बुझे। यस कारण, म प्रोफाइल Levshin संस्थान, कक्षहरू को घातक परिवर्तन को समस्या केन्द्रित हुनेछ जो सिर्जना गर्ने निर्णय गरे। देर 19 औं सताब्दी मा, डाक्टर कहाँ यो सँगी प्राध्यापकहरू द्वारा समर्थित थियो मास्को विश्वविद्यालय को वैज्ञानिक परिषद, आफ्नो विचार घोषणा। संस्थान। Herzen आधिकारिक 1903 मा खोलिएको थियो। चिकित्सा स्थापना मात्र 65 विरामीहरु लिन सक्छ गर्दा। यसको upkeep लागि दान Morozov परिवार विनियोजन। त्यसैले, पहिलो वर्ष, संस्थान आफ्नो सम्मान मा नाम थियो।
पहिलो विश्व युद्ध नेतृत्व चिकित्सा सुविधा समयमा प्रोफेसर Herzen, जो आफ्नो क्यारियर अवधिमा चिकित्सा संस्था विकास गर्न एक विशाल योगदान गरेको छ उभिए। 1947 मा संस्थान उहाँलाई, आधुनिक पल्ट बाँचे गरेपछि नाम थियो। अब MNIOI Herzen एक प्रमुख चिकित्सा छ , मास्को मा केन्द्र घातक neoplasms को समस्याहरूको सामना।
संस्थान द्वारा के सेवाहरू प्रदान गरिन्छ?
चिकित्सा संस्था क्यान्सर प्रक्रियाहरू पत्ता लगाउन र तिनीहरूलाई लागि कुशल चिकित्सा हेरविचार प्रदान गर्न डिजाइन गरिएको छ। संस्थान। Herzen भनेर क्यान्सर निदान को सबै प्रकार को माध्यम ले जाने अनुमति दिन्छ उपकरण छ, र पनि रोगी को जीवन को गुणस्तर को पुनर्वास र सुधार को लागि चिकित्सा र शल्य चिकित्सा उपायहरु आयोजित। साथै, चिकित्सा स्थापना ट्यूमर हटाउन शल्यक्रिया गर्ने विरामीहरु को पुनर्वास मा लगी भएको छ। MNIOI मा Herzen निम्न उपचार अभ्यास:
विभिन्न अङ्गहरू मा सर्जिकल हस्तक्षेप क्यान्सर degeneration प्रभावित।
विरामीहरु anticancer लागूऔषधको औषधि उपचार।
परिसर मा सबै उपचार लागू हुन्छ।
स्तन क्यान्सर संग प्लास्टिक सर्जरी विरामीहरु।
Palliative हेरविचार क्यान्सर प्रक्रिया अन्तिम चरणमा जीवनको बिरामीको गुणस्तर सुधार गर्न प्रदान गरिएको छ।
विशेषज्ञ सल्लाह प्राप्त र निदान प्रक्रियाहरु undergo प्रत्येक रोगी, संस्थान सम्पर्क गर्न सक्छ गर्नुहोस्। Herzen। oncological pathologies को उपचार को लागत ट्यूमर स्थान र चिकित्सा हस्तक्षेप को मात्रा मा निर्भर गर्दछ। एक विशेषज्ञ संस्थान संग अनलाइन परामर्श समयमा सबै आवश्यक जानकारी प्राप्त। यो सेवा आधिकारिक साइट संस्थाहरू मा उपलब्ध छ, तर 3500 rubles भुक्तानी गर्न यो हुनेछ लागि।
MNIOI मा क्यान्सर को निदान
संस्थान। Hertzen सहायक अनुसन्धानहरूले को एक विस्तृत श्रृंखला कार्य गर्दछ। आधुनिक उपकरणहरू धन्यवाद प्रकट oncologic प्रक्रिया धेरै प्रारम्भिक चरण मा हुन सक्छ। को भनाइ समीक्षा जान्छ रूपमा, संस्थान Herzen केहि सबै अङ्गहरू को अध्ययन र प्रणाली पूरा सूची क्यान्सर पत्ता उद्देश्य जो, मास्को मा चिकित्सा संस्थाहरू मध्ये एक हो। तिनीहरूमध्ये:
सबै अङ्गहरूको एक्स-रे निदान। विभिन्न अनुमानहरु तस्बिरहरू contrasting द्वारा प्रदर्शन। अनुसन्धान को सबैभन्दा लोकप्रिय विधिहरू छन्: mammo-, uro- र hysterography।
सबै अङ्गहरूको कम्प्युटेड टोमोग्राफी, mediastinum।
एक्स-रे र अल्ट्रासाउंड नियन्त्रणमा प्वाल पार्ने काम।
Radionuclide निदान (थाइरोइड, मृगौला, मस्तिष्क)।
सबै अङ्गहरूको अल्ट्रासाउंड।
निदान को endoscopic साधन (FEGDS, broncho-, colonoscopy, rectoscopy) को प्रयोग गरेर।
के प्रयोगशाला परीक्षण MNIOI मा ठाउँ लिन सक्छ?
साथै, थुप्रै परीक्षा को Herzen संस्थान मा सकिन्छ। प्रयोगशाला MNIOI जो मार्फत oncological प्रक्रियाहरू को निदान को आधुनिक तरिका कार्यान्वयन अभिकर्मकों को धेरै छ, छ। मूत्र र रगतको सामान्य विश्लेषण बाहेक, यसलाई बाहिर छ sputum, साथै बायोप्सी समयमा लिएको सामाग्री रूपमा। bacteriological निदान, koagulografiya, immunomorphology बाहिर संस्थान को प्रयोगशालाहरुमा लगे। साथै, चिकित्सा संस्था जाँच्ने onkotsitologiyu मा smears, सामाग्री को इलेक्ट्रन माइक्रोस्कोपी प्रदर्शन। विरामीहरु अनुसन्धान परिणाम शुद्धता doubted सकिँदैन दाबी गर्छन्।
वैज्ञानिक अग्रिम MNIOI
मास्को मा पहिलो चिकित्सा संस्था, ओन्कोलजी मा विशेषज्ञता, संस्थान भयो। Herzen। ठेगाना अस्पताल: दोस्रो Botkinsky संभावना,3यस संस्थाले अनुसन्धान मा 100 भन्दा बढी वर्षसम्म निदान र क्यान्सर को उपचार को थप नयाँ तरिका सिर्जना उद्देश्य, बाहिर छ। संस्थान को उपलब्धिहरू विकिरण चिकित्सा, सञ्चालन अंग र पुनर्निर्माण सर्जरी को अभ्यास को परिचय हो। मेडिकल सेन्टर घातक ट्यूमर को लेजर उपचार को संस्थापक मध्ये एक भए। वैज्ञानिक काम ज्ञात र व्यवहार मा प्रयोग MNIOI, राष्ट्रिय क्यान्सर केन्द्र मा मात्र, तर पनि विदेश।
संस्थान। Herzen: सेन्ट पीटर्सबर्ग र मास्को
MNIOI - ओन्कोलोजी संस्थान मात्र मास्को मा स्थित छ जो देश, छ। रूस को उत्तरी राजधानी मा पनि, एउटै नाम को स्थापना छ। त्यसैले, धेरै संस्थान रूपमा एक यस्तो संस्था को उल्लेख मा समझ को अभाव छ। Herzen। सेन्ट पीटर्सबर्ग ठूलो रूसी लेखक र साहित्यिक आलोचक को सम्मान मा नाम थियो जो एक उल्लेखनीय शैक्षणिक विश्वविद्यालय, दावा। आफ्नो नाम प्रोफेसर पी ए Gertsena को कि जस्तै हो भन्ने तथ्यलाई कारण, मान्छे रूस विभिन्न शहर मा स्थित हो जो संस्थाहरू, उद्देश्य बारे कहिलेकाहीं भ्रमित छन्। तपाईं त्यहाँ चिकित्सक Petrova एन पछि नाम छ जो यस मुद्दा, समर्पित एक चिकित्सा केन्द्र छ क्यान्सर संस्थान, प्रसिद्ध डाक्टर मास्को र सेन्ट पीटर्सबर्ग मा स्थित छ भनेर थाहा हुनुपर्छ
संस्थान। Herzen (ओन्कोलजी): विरामीहरु र चिकित्सकहरु को प्रतिक्रियाहरू
MNIOI रूस मा एक प्रमुख क्यान्सर केन्द्र हो। संस्थान को विरामीहरु रूस सबै क्षेत्रहरु देखि साथै अन्य देशका मानिसहरू हुन्। डा गंभीर अवस्थामा अन्य oncological क्लिनिक, MNIOI तिनीहरूलाई परामर्श आफ्नो विरामीहरु सल्लाह। Herzen, को निदान लागि सबै आवश्यक उपकरण, साथै विशेष उपचार त्यहाँ छ रूपमा बाहिर छन्। विरामीहरु र आफ्नो नातेदार डाक्टर देखि ध्यान, आफ्नो व्यावसायिकता, साथै प्रदर्शन प्रक्रियाहरु को एक विस्तृत श्रृंखला भन्छन्।
महिलाहरु को फ्लोरा मा स्मीयर मा ऊंचे ल्यूकोसाइट
Coccygeal र sacral vertebrae
पुरुष डेनिम छोटकरीमा - स्टाइलिश, आरामदायक, गर्मी सधैं उपयुक्त छ
संयुक्त अवकाश को अनुसूची मा बच्चाहरु को लागि कराओके समावेश
बोली शिष्टाचार को नियम मा "तपाईं" अपिल
Gynecology मा Methyluracyl मोमबत्ती: समीक्षा र आवेदन
उपचार र नैदानिक संवेदना "Obolsunovo" इवानोवा क्षेत्र मा: स्वास्थ्य मा आराम